ပိုးသားလေးလို တောက်ပြောင်ချောမွေ့တဲ့ ဆံကေသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ - For her Myanmar
ဆံနွယ်လေးတွေ သံစဉ်တေးလိပ်ပြာဆိုတာမျိုး ဖြစ်သွားရအောင်…
ဆံနွယ်လေးကို ပိုးသားလေးလို တောက်ပြောင်စေချင်တဲ့လူရှိရင် လက်ထောင် …
အားလုံးပဲ ဟုတ် ? ဆံပင်လေးလှလှပပဖြစ်နေတဲ့နေ့ဆို ကိုယ်တွေများ ကွန်ဖီးဒန့်လယ်ဗယ် ဆိုးဟိုက်နော်… ကျန်းမာတောက်ပြောင်တဲ့ ဆံကေသာလေးပိုင်ဆိုင်ရဖို့ဆိုတာကလည်း လွယ်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ဒီဆောင်ရန်ရှောင်ရန်အချက်တွေကို လိုက်နာရင် ပိုးသားလိုဆံနွယ်လေးတွေကို အမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုတာ ယုံကြည်လိုက်ပါ။
(၁) ခေါင်းလျှော်ရင် နည်းမှန်လမ်းမှန်နဲ့ လျှော်ပါ။
နည်းမှန်လမ်းမှန်ဆိုတာ အခြားမဟုတ်ပါဘူး။ ခေါင်းလျှော်ရည်သုံးရင် ကျပ်ပြားစေ့ပမာဏလောက်ထည့်ပြီး ဆံပင်အရင်းနဲ့ ဦးရေပြားကို နှိပ်နယ်ပေးပါ။ ဆံပင်ပျော့ဆေး (conditioner) ကိုတော့ ဆံပင်အဖျားတွေမှာ သုံးပေးပြီး သုံးမိနစ်လောက် ပေါင်းထားပါ။ နောက်တစ်ချက်က ခေါင်းလျှော်ရင် ရေအေးနဲ့လျှော်တာက ဆံပင်တွေကို ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးနိုင်ပါတယ်။
(၂) ဦးရေပြားကို ဗီတာမင် E ဓာတ်ပြည့်ဝနေပါစေ။
ဗီတာမင် E က ဆံသားကျန်းမာဖို့ အဓိကလိုအပ်ချက်ဆိုတာ ယောင်းတို့ သိကြမယ် ထင်ပါတယ်။ ဗီတာမင် E က ဦးရေပြားရဲ့ သွေးလည်ပတ်မှုကို အားကောင်းစေပြီး ဆံပင်ရှုပ်ခြင်း၊ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းနဲ့ ဆံသားကျွတ်ဆတ်ခြင်းကို လျော့နည်းစေပါတယ်။ Silk-n Shine ရဲ့ Super Silky daily haircoat က ရှားစောင်းလက်ပတ်မှ ထုတ်ယူထားတဲ့အဆီပါဝင်တာကြောင့် ဗီတာမင် E ဓာတ်ကို အားဖြည့်ပေးပြီး ဦးရေပြားကို အေးမြစေပါတယ်။ ရေဓာတ်လည်းဖြည့်ပေးတာကြောင့် ဆံပင်ကို သုံးဆပိုပြီး ချောမွေ့တောက်ပြောင်စေပါတယ်။
Related article >>> ခြောက်သွေ့တဲ့ဆံသားတွေကို ထိန်းသိမ်းနည်းအဆင့်ဆင့်
(၃) ပြင်းထန်တဲ့အပူဓာတ်နဲ့ ပုံသွင်းတာကို ရှောင်ပါ။
ဆံပင်အခြောက်ခံတာဖြစ်ဖြစ်၊ စက်ဆွဲတာဖြစ်ဖြစ်၊ ဆံပင်ကောက်တာဖြစ်ဖြစ် လျှပ်စစ်ပစ္စည်းတွေသုံးပြီး ပုံသွင်းတော့မယ်ဆိုရင် အပူကာပစ္စည်းတွေကို ကြားခံအနေနဲ့ သုံးပေးတာမမှားပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ အပူဒဏ်ကြောင့် ဆံပင်တွေကျိုးကျေပျက်စီးတာမျိုးမဖြစ်တော့ဘဲ ကျန်းမာလှပပြီး ပုံကျတဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
ညအိပ်ရာမဝင်ခင် ဆံပင်ကို ပေါင်းပြီးမှ အိပ်တာက ယောင်းတို့ရဲ့ ဆံနွယ်လေးတွေကို အားပြည့်စေပါတယ်။ အုန်းဆီ (သို့) သံလွင်ဆီကို ဦးရေပြားကနေ ဆံပင်အဖျားအထိ လိမ်းပြီး မျက်နှာသုတ်ပုဝါနဲ့ တစ်ညပေါင်းထားလိုက်ပါ။ မနက်နိုးလို့ ခေါင်းပြန်လျှော်လိုက်ရင် မထင်မှတ်ထားလောက်အောင် နူးညံ့တောက်ပြောင်နေမှာ အမှန်ပါပဲ။
(၅) အိုမီဂါ (၃) ပါတဲ့အစားအစာတွေ စားပေးပါ။
ငါးကြီးဆီမှာ အဓိကပါတဲ့ Omega3fatty acid ဆိုတာ ယောင်းတို့ကြားဖူးကြမှာပါ။ ဒီဓာတ်က ဆံသားနဲ့ လက်သည်းခွံတွေ ပျက်စီးခြင်းကနေ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။ တကယ်လို့ ယောင်းက Stella လိုမျိုး ငါးကြီးဆီကို လုံးဝမကြိုက်တဲ့သူဖြစ်နေရင်လည်း ကိစ္စမရှိပါဘူး။ Omega3fatty acid က ကြက်ဥအနှစ်၊ ငါးသေတ္တာ၊ ဆယ်လ်မွန်ငါး နဲ့ အစေ့အဆန်တွေမှာလည်း ပြည့်ပြည့်ဝဝပါဝင်တာကြောင့် ကိုယ်ကြိုက်တာလေးကို ရွေးစားပြီး ကျန်းမာလှပတဲ့ဆံပင်လေးပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။
ကဲ … ဒီအချက်လေးတွေကို ဂရုတစိုက်လုပ်ပေးပြီး ပိုးသားလေးလို ချောမွေ့တောက်ပြောင်တဲ့ ဆံကေသာလေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေနော် …
ဆံနှယျလေးတှေ သံစဉျတေးလိပျပွာဆိုတာမြိုး ဖွဈသှားရအောငျ…
ဆံနှယျလေးကို ပိုးသားလေးလို တောကျပွောငျစခေငျြတဲ့လူရှိရငျ လကျထောငျ …
အားလုံးပဲ ဟုတျ ? ဆံပငျလေးလှလှပပဖွဈနတေဲ့နဆေို့ ကိုယျတှမြေား ကှနျဖီးဒနျ့လယျဗယျ ဆိုးဟိုကျနျော… ကနျြးမာတောကျပွောငျတဲ့ ဆံကသောလေးပိုငျဆိုငျရဖို့ဆိုတာကလညျး လှယျတဲ့ကိစ်စမဟုတျပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ဒီဆောငျရနျရှောငျရနျအခကျြတှကေို လိုကျနာရငျ ပိုးသားလိုဆံနှယျလေးတှကေို အမွနျဆုံးပိုငျဆိုငျရမယျဆိုတာ ယုံကွညျလိုကျပါ။
(၁) ခေါငျးလြှျောရငျ နညျးမှနျလမျးမှနျနဲ့ လြှျောပါ။
နညျးမှနျလမျးမှနျဆိုတာ အခွားမဟုတျပါဘူး။ ခေါငျးလြှျောရညျသုံးရငျ ကပျြပွားစပေ့မာဏလောကျထညျ့ပွီး ဆံပငျအရငျးနဲ့ ဦးရပွေားကို နှိပျနယျပေးပါ။ ဆံပငျပြော့ဆေး (conditioner) ကိုတော့ ဆံပငျအဖြားတှမှော သုံးပေးပွီး သုံးမိနဈလောကျ ပေါငျးထားပါ။ နောကျတဈခကျြက ခေါငျးလြှျောရငျ ရအေေးနဲ့လြှျောတာက ဆံပငျတှကေို ရဓောတျဖွညျ့ပေးနိုငျပါတယျ။
(၂) ဦးရပွေားကို ဗီတာမငျ E ဓာတျပွညျ့ဝနပေါစေ။
ဗီတာမငျ E က ဆံသားကနျြးမာဖို့ အဓိကလိုအပျခကျြဆိုတာ ယောငျးတို့ သိကွမယျ ထငျပါတယျ။ ဗီတာမငျ E က ဦးရပွေားရဲ့ သှေးလညျပတျမှုကို အားကောငျးစပွေီး ဆံပငျရှုပျခွငျး၊ ဆံပငျကြှတျခွငျးနဲ့ ဆံသားကြှတျဆတျခွငျးကို လြော့နညျးစပေါတယျ။ Silk-n Shine ရဲ့ Super Silky daily haircoat က ရှားစောငျးလကျပတျမှ ထုတျယူထားတဲ့အဆီပါဝငျတာကွောငျ့ ဗီတာမငျ E ဓာတျကို အားဖွညျ့ပေးပွီး ဦးရပွေားကို အေးမွစပေါတယျ။ ရဓောတျလညျးဖွညျ့ပေးတာကွောငျ့ ဆံပငျကို သုံးဆပိုပွီး ခြောမှတေ့ောကျပွောငျစပေါတယျ။
Related article >>> ခွောကျသှတေဲ့ဆံသားတှကေို ထိနျးသိမျးနညျးအဆငျ့ဆငျ့
(၃) ပွငျးထနျတဲ့အပူဓာတျနဲ့ ပုံသှငျးတာကို ရှောငျပါ။
ဆံပငျအခွောကျခံတာဖွဈဖွဈ၊ စကျဆှဲတာဖွဈဖွဈ၊ ဆံပငျကောကျတာဖွဈဖွဈ လြှပျစဈပစ်စညျးတှသေုံးပွီး ပုံသှငျးတော့မယျဆိုရငျ အပူကာပစ်စညျးတှကေို ကွားခံအနနေဲ့ သုံးပေးတာမမှားပါဘူး။ ဒီလိုဆိုရငျတော့ အပူဒဏျကွောငျ့ ဆံပငျတှကြေိုးကပြေကျြစီးတာမြိုးမဖွဈတော့ဘဲ ကနျြးမာလှပပွီး ပုံကတြဲ့ ဆံကသောကို ပိုငျဆိုငျနိုငျမှာပါ။
ညအိပျရာမဝငျခငျ ဆံပငျကို ပေါငျးပွီးမှ အိပျတာက ယောငျးတို့ရဲ့ ဆံနှယျလေးတှကေို အားပွညျ့စပေါတယျ။ အုနျးဆီ (သို့) သံလှငျဆီကို ဦးရပွေားကနေ ဆံပငျအဖြားအထိ လိမျးပွီး မကျြနှာသုတျပုဝါနဲ့ တဈညပေါငျးထားလိုကျပါ။ မနကျနိုးလို့ ခေါငျးပွနျလြှျောလိုကျရငျ မထငျမှတျထားလောကျအောငျ နူးညံ့တောကျပွောငျနမှော အမှနျပါပဲ။
(၅) အိုမီဂါ (၃) ပါတဲ့အစားအစာတှေ စားပေးပါ။
ငါးကွီးဆီမှာ အဓိကပါတဲ့ Omega3fatty acid ဆိုတာ ယောငျးတို့ကွားဖူးကွမှာပါ။ ဒီဓာတျက ဆံသားနဲ့ လကျသညျးခှံတှေ ပကျြစီးခွငျးကနေ ကာကှယျပေးပါတယျ။ တကယျလို့ ယောငျးက Stella လိုမြိုး ငါးကွီးဆီကို လုံးဝမကွိုကျတဲ့သူဖွဈနရေငျလညျး ကိစ်စမရှိပါဘူး။ Omega3fatty acid က ကွကျဥအနှဈ၊ ငါးသတ်ေတာ၊ ဆယျလျမှနျငါး နဲ့ အစအေ့ဆနျတှမှောလညျး ပွညျ့ပွညျ့ဝဝပါဝငျတာကွောငျ့ ကိုယျကွိုကျတာလေးကို ရှေးစားပွီး ကနျြးမာလှပတဲ့ဆံပငျလေးပိုငျဆိုငျနိုငျပါတယျ။
ကဲ … ဒီအခကျြလေးတှကေို ဂရုတစိုကျလုပျပေးပွီး ပိုးသားလေးလို ခြောမှတေ့ောကျပွောငျတဲ့ ဆံကသောလေးကို ပိုငျဆိုငျနိုငျပါစနေျော …
Tags: Beauty, hair, hair care, Hair Mask, hair spa, hair styling
မျက်ကပ်မှန်တပ်ဆင်သူတိုင်း သိထားသင့်တဲ့အချက် (၅) ချက်